प्रधानमन्त्रीको धम्की, ‘कसैले थर्काएर डराउँदैनौं - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
प्रधानमन्त्रीको धम्की, ‘कसैले थर्काएर डराउँदैनौं
काठमाडौँ, साउन २ । जुम्लामा १८ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागबारे मंगलबार पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेन ।
सरकारी टोलीले पहिला डा।केसीलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अडान राखेपछि मागमा छलफलै हुन नसकेको डा. केसीका प्रतिनिधिले बताए । सोमबार र मंगलबारको अनौपचारिक वार्तापछि सरकार पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
जुम्लामा १८ दिनदेखि अनशनरत डा. गोविन्द केसीका मागबारे मंगलबार पनि औपचारिक वार्ता हुन सकेन । सरकारी टोलीले पहिला डा।केसीलाई काठमाडौं ल्याउनुपर्ने अडान राखेपछि मागमा छलफलै हुन नसकेको डा. केसीका प्रतिनिधिले बताए। सोमबार र मंगलबारको अनौपचारिक वार्तापछि सरकार पेलेर अघि बढ्ने रणनीतिमा रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ।
‘बिहान ९ बजेदेखि सरकारी पक्षसँग बस्दा पनि वार्ताको न्यूनतम वातावरण बन्न सकेन,’ छलफलमा संलग्न डा।अभिषेकराज सिंहले भने, ‘सरकारले पेलेर जाने रणनीति लिएजस्तो छ ।’ सरकारी पक्षले डा. केसीलाई उपचारका लागि काठमाडौं नल्याएसम्म कुनै कुरा नगर्ने अडान लिएको उनले बताए ।
‘सरकारी टोलीसँग एजेन्डा र मागबारे कुनै कुरा भएन, उहाँहरूले डा।केसीलाई काठमाडौं ल्याउन हेलिकप्टर तम्तयार राखेको मात्रै बताउनुभयो,’ केसीका प्रतिनिधि अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले भने । सरकारी टोलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयक फिर्ता लिने विषयमा छलफल गर्नै नचाहेको उनले जनाए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कसैले थर्काएको भरमा नडराउने बताएका छन् । पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा मंगलबार आयोजित कार्यकर्ता भेटमा उनले भने, ‘संविधान, नियम, कानुन र विधिअनुसारै सरकारले काम गर्छ। जसले जे माग राख्यो त्यो पूरा गर्ने, कसैले थर्काउँदा थर्किने वा दबाबमा परेर निर्णय गर्ने काम हुँदैन ।’कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।